Warbixinta EIA ee Warshadda Gawaarida Guryaha ee laga dhisayo Bursa ayaa lagu dhawaaqay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaWarbixinta EIA ee Warshadda Gawaarida Guryaha ee laga dhisayo Bursa ayaa lagu dhawaaqay
06 / 05 / 2020 16 Bursa, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, baabuurta, TURKEY
Warbixinta CED ee warshadda gawaarida guryaha ee laga dhisi doono Bursa ayaa la shaaciyey
Baabuurta Initiative Group (TOGG) warshad gaari gudaha Turkey ee lagu dhamayn doonaa 18 bilood oo soo saari doonaa laba kun oo qof ka shaqeyn doonaan dhismaha. Sida lagu sheegay warbixinta, maalgalin dhan 500 bilyan oo lira ayaa la samayn doonaa, 22 milyan oo ka mid ah waxay ka timid la-hawlgalayaasha shirkadda.
Osman Cobanoglu wargeyska ka soo TurkeySida ku cad warbixintii EIA ee warshadda ee laga dhisi lahaa Bursa, oo ah halka lagu aasaasayo aasaaska gaariga gudaha, ayaa la shaaciyey.
Turkey ayaa Initiative Group (TOGG) Baabuurta soo saari doonaa wajiga dhismaha gaari gudaha ee warshadda qaadan doonaa 18 bilood guud ahaan. Hawsha komishanka ayaa gaari doonta May 2021. Soosaaradu waxay bilaabmi doontaa 2022. Laba kun oo qof ayaa shaqeyn doona inta lagu gudajiro dhismaha warshadda, oo laga dhisi doono aagga militariga ee u dhow degmada Gemlik ee Bursa. Marxaladda hawlgalka, waxaa la qorsheynayaa in ay shaqaaleysiiso 2023 2 qof 420 iyo 2032 4 qof illaa 323.
Shaqaalaha ka shaqeeya mashruucan waxaa laga soo iibsan doonaa ugu horayn dadka deegaanka.
'Marka hore Suuqa Guryaha, ka dibna Yurub'
Warbixinta EIA waxay sidoo kale xustay shaqadii loo qabtay si loo go'aamiyo badeecada baabuurka. Macnaha halkan, daraasad lagu sameeyey ku saabsan hab dhaqanka muunad-qaadashada ku saabsan iibka ah ee baabuurta la laba kun ee Turkey. Sida laga soo xigtay cilmi suuqa ee Turkey ee qeybta C ee, a Sport Utility Vehicle (SUV) waxaa lagu arkay in dalabka waa heer sare ah. Waxaa lagu nuuxnuuxsaday in sheygii ugu horreeyay ee la go’aansaday inuu noqdo SUV qeybta C, maaddaama saadaasha suuqa ay sidoo kale muujisay in suuqa seddax uu kor u kici doono 1-2 boqolkiiba halka SUV-yada ay kori doonaan wax ka badan 8 boqolkiiba toddobada illaa sideedda sano ee soo socota. Waxaa loogu talagalay in lagu soo bandhigo wax soo saarka ugu horreeya, C-SUV, ugu horrayn suuqa gudaha, iyo in la bilaabo dhoofinta laba sano ka dib suuqyada Yurub halkaas oo baabuurta korantada si weyn looga doorbido.
Sababta loo doortay Bursa warshad waxay ahayd arin kale oo lagu cadeeyay EIA. Istanbul kula gobolka xumeeyayna Turkiga horumariyo kaabayaasha warshadaha iyo logistics meel sida beddel u ah mashruuca, Sakarya, Kocaeli iyo Bursa ayaa sheegay in baaritaan magaalada. Gobolka Aegean, İzmir iyo Manisa waa la qiimeeyay.
Imtixaanadii la qaaday, waxaa la sheegay in aagga Bursa uu u taagan yahay sababtuna tahay badda oo dekeddu ku taal meel u dhow dhulka. Waxaa loo qorsheeyay in lagu soo daabulo gawaarida lagu soo saaro dekada si fudud looga gudbo badda. U dhawaanshaheeda buundada Osmangazi iyo warshada-hoosaadka sidoo kale waxay door muhiim ah ka ahayd xulitaanka Bursa.
Waxay yareyn doontaa Khasaaraha xisaabaadka ee hadda jira 7 Bilyan Euros
Warbixinta, waxaa lagu sheegay in wadarta raasumaalka ay dhigtaan sharikadaha iskaashanaya ay noqon doonaan 2023 milyan Euros marka la gaaro 500. Wadarta qiimaha mashruucan ayaa lagu cadeeyay 22 bilyan oo liras ah oo ay kujiraan diyaarinta mashruuca, injineerinka kahor, rukhsadaha, dhismaha, mashiinada, korontada, rakibaada, qalabka, kulanka, komishanka, horumarinta wax soo saarka, alaabada suuq geynta. Mashruucan, marka la gaaro sannadka 2032, waxaa la rajaynayaa inuu ku deeqo 50 bilyan oo yuuro wax soo saarka guud, si loo naaquso xisaabta hadda jirta 7 bilyan oo yuuro, iyo in la abuuro 20 kun oo shaqooyin dheeraad ah oo lala kaashado warshadaha wax soo saare.
Ciidda goobta ayaa la keydin doonaa
In kasta oo aagga mashruucan loo qoondeeyey TOGG muddo 49 sano ah, 50 baabuur, 10 dhagxaan munaasib ah, shan baloog oo mobayl ah, shan mashiin qashin qub ah, shan mashiin oo qashin qub ah, 20 qasay, saddex bambaanooyin la taaban karo iyo shan jet oo lagu samaynayo inta lagu gudajiray diyaarinta iyo dhismaha. mashiin ayaa la isticmaali doonaa.
Sikastaba, gawaarida gawaarida mashiinada dhismahan kaliya ayaa gali doona kana bixi doona si ay alaabada ugu keenaan garoonka Waxaa jiri doona 10 centimitir oo carrada daaqsinka ah meelaha laga qodayo qeyb ka mid ah goobta walxaha ciidda ahna waxaa lagu dabiibi doonaa qashin-qubka. Ciidda heshay waxay si gaar ah loogu hayn doonaa kaydinta carrada khudradda ah ee lagu abuuri doono aagga.
Warshadda Volkswagen Manisa Xagee lagu rakibayaa?
Taariikhda tareenka xawaaraha sare ee gudaha
Maanta taariikhda: 6 Agoosto 1968 Dhismaha guryaha ee Eskisehir ...